?လူတိုငျးသိတဲ့ ‘ပါရာစီတမောလျ’ရဲ့ လူသိပျမသိတဲ့ အခကျြတှေ ? – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
လူမှနျရငျ ခေါငျးကိုကျဖူးတယျ.. ဖြားဖူးတယျ.. ညောငျးညာကိုကျခဲဖူးကွတယျ။ ဒီဝဒေနာတှသေကျသာစဖေို့လညျး ဆေးမွီးတို.. တိုငျးရငျးဆေး..ဓာတျစာ..အနောကျတိုငျးဆေးဝါးတှကေစလို့ နောကျဆုံးပျေါကုထုံးမြိုးစုံအထိ အသုံးခခြဲ့ကွတာပေါ့။
ဒါပမေဲ့ ဖြားရငျ ခေါငျးကိုကျရငျ ဘာဆေးသောကျရမလဲလို့ အိပျပြျောနတေဲ့ လူကို ရုတျတရကျနှိုးမေးရငျတောငျ ဆယျယောကျမှာ ကိုးယောကျလောကျက
‘ပါရာ သောကျလိုကျပေါ့’ လို့ပဲပွောမှာပါ။ တကယျလညျး ပါရာစီတမောလျဟာ လူတှရေဲ့ နစေ့ဉျဘဝမှာ တျောတျောလေး အရေးပါတဲ့ ဆေးစှမျးကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီဆေးရဲ့ သိပျလူသိမမြားတဲ့ အခကျြလေးတှေ နညျးနညျးပွောပွခငျြပါတယျ။
? ပါရာ (para) လို့ အရပျထဲမှာ အတိုကောကျချေါတတျကွပါတယျ။
ဆေးဘူးတှပေျေါမှာ Acetaminophen လို့ ရေးတတျသလို APAPလို့လညျး ဖျောပွထားတတျပါတယျ။ ဒီနာမညျတှအေားလုံးက N-acetyl-para-aminophenol ဆိုတဲ့ ဓာတုအမညျကနေ ပျေါထှကျလာတာပါ။
? 1877 မှာ Harmon Northrop Morse က စတငျထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၁၄၀ကြျောပေါ့။ ဆေးဝါးအဖွဈ တှငျတှငျကယျြကယျြ စသုံးလာတာကတော့ 1950 ဝနျးကငျြမှ ဖွဈပါတယျ။ ခုတော့ WHO ဆိုတဲ့ ကမ်ဘာ့ ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကွီးရဲ့ List of Essential Medicines ဆိုတဲ့ မရှိမဖွဈ ဆေးဝါးစာရငျးမှာ ပါဝငျနရေပါပွီ။
? Non-opioid analgesics အုပျစုထဲမှာပါဝငျပွီး နာကငျြကိုကျခဲမှုဖွဈစတေဲ့ prostaglandins တှမေထုတျပေးအောငျ COX(cyclo oxygenase) ဆိုတဲ့ Enzyme ကို တားပေးပါတယျ။
တခွား Non opioid အကိုကျအခဲ ပြောကျဆေးတှထေကျ ပိုအားသာခကျြတဈခုက Central Nervous system ဆိုတဲ့ ပငျမဦးနှောကျ အာရုံကွောစနဈမှာ စတငျ အလုပျလုပျတာမို့ ခေါငျးကိုကျပိုသကျသာစပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရောငျရမျးတာတှေ ကစြဖေို့တော့ သိပျမစှမျးနိုငျပါဘူး။
? Paracetamol ကို သောကျဆေး အပွငျ စအိုထဲထညျ့ရတဲ့ supository ဆေးတောငျ့..သှေးပွနျကွောကနသှေငျးရတဲ့ Intravenous injection အနနေဲ့ပါ ရနိုငျပါတယျ။ ပါရာစီတမောလျ နဲ့ အခွားအကိုကျအခဲပြောကျဆေး ဒါမှမဟုတျ နှာစေးပြောကျဆေးတှနေဲ့ တှဲထုတျလုပျထားတဲ့ ဆေးတှလေညျးရှိတာမို့ ဆေးတှပေိုမသောကျမိအောငျ ပါဝငျပစ်စညျးမှာ Acetaminophen လို့ရေးထားမထား သခြောသတိထားဖို့ လိုပါတယျ။
? ကိုယျဝနျဆောငျနဲ့ နို့တိုကျမိခငျတှအေတှကျလညျး အတျောလေးစိတျခသြောကျလို့ ရတဲ့ ဆေးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သိပျမလိုအပျရငျတော့ မသောကျသငျ့ပါ။
? အသညျးမှာ အဓိက အလုပျလုပျပွီး ဆီးကနပွေနျလညျစှနျ့ထုတျပါတယျ။ အသညျးရောဂါရှိသူတှမှောတော့ သတိထားသောကျဖို့ လိုပါတယျ။
? half-life ဆိုတဲ့ သူ့အာနိသငျတဈဝကျကုနျဖို့ အခြိနျက လူပျေါမူတညျပွီး တဈနာရီကနေ လေးနာရီအထိ ကွာတတျတာမို့ ဆေးသောကျပွီး နှဈနာရီကနေ ရှဈနာရီအတှငျးမှာ ဆေးအရှိနျကုနျသှားပွီး ကိုယျပူပွနျတကျ ခေါငျးပွနျကိုကျနိုငျပါတယျ။
? သောကျဆေးက ဆေးအာနိသငျပွဖို့ ၃၇မိနဈကွာပါတယျ။ စအိုတှငျးထညျ့ရငျတော့ ၁၅မိနဈကွာရငျဆေးစှမျးပွပါတယျ။ အကွောတှငျး ထိုးဆေးကတော့ ၈မိနဈဆို စသကျသာလာပါမယျ။ ထိုးဆေးကတော့ အတျောအသုံးနညျးပါတယျ။
? အမြားဆုံးသောကျနိုငျတဲ့ ပမာဏက တဈခါသောကျရငျ 1 gram(500 mg ပါရာစီတမောလျ နှဈလုံး) ဖွဈပွီး အနညျးဆုံး ခွောကျနာရီခွားဖို့လိုပါတယျ။
တဈနကေုနျမှာ 500mg ဆေး ၈လုံးထကျ မပိုရပါဘူး။ အသညျးပကျြစီးနိုငျပါတယျ။ အရကျသောကျသူတှဆေိုရငျတော့ ပိုဆိုးမှာပါ။
? အစာအိမျမထိခိုကျစတေဲ့ တဈခုတညျးသော အကိုကျအခဲပြောကျဆေးလညျး ဖွဈပါတယျ။
?လူတိုင်းသိတဲ့ ‘ပါရာစီတမောလ်’ရဲ့ လူသိပ်မသိတဲ့ အချက်တွေ ?
လူမှန်ရင် ခေါင်းကိုက်ဖူးတယ်.. ဖျားဖူးတယ်.. ညောင်းညာကိုက်ခဲဖူးကြတယ်။ ဒီဝေဒနာတွေသက်သာစေဖို့လည်း ဆေးမြီးတို.. တိုင်းရင်းဆေး..ဓာတ်စာ..အနောက်တိုင်းဆေးဝါးတွေကစလို့ နောက်ဆုံးပေါ်ကုထုံးမျိုးစုံအထိ အသုံးချခဲ့ကြတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ဖျားရင် ခေါင်းကိုက်ရင် ဘာဆေးသောက်ရမလဲလို့ အိပ်ပျော်နေတဲ့ လူကို ရုတ်တရက်နှိုးမေးရင်တောင် ဆယ်ယောက်မှာ ကိုးယောက်လောက်က
‘ပါရာ သောက်လိုက်ပေါ့’ လို့ပဲပြောမှာပါ။ တကယ်လည်း ပါရာစီတမောလ်ဟာ လူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ တော်တော်လေး အရေးပါတဲ့ ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးရဲ့ သိပ်လူသိမများတဲ့ အချက်လေးတွေ နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်။
? ပါရာ (para) လို့ အရပ်ထဲမှာ အတိုကောက်ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။
ဆေးဘူးတွေပေါ်မှာ Acetaminophen လို့ ရေးတတ်သလို APAPလို့လည်း ဖော်ပြထားတတ်ပါတယ်။ ဒီနာမည်တွေအားလုံးက N-acetyl-para-aminophenol ဆိုတဲ့ ဓာတုအမည်ကနေ ပေါ်ထွက်လာတာပါ။
? 1877 မှာ Harmon Northrop Morse က စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၄၀ကျော်ပေါ့။ ဆေးဝါးအဖြစ် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် စသုံးလာတာကတော့ 1950 ဝန်းကျင်မှ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ WHO ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ List of Essential Medicines ဆိုတဲ့ မရှိမဖြစ် ဆေးဝါးစာရင်းမှာ ပါဝင်နေရပါပြီ။
? Non-opioid analgesics အုပ်စုထဲမှာပါဝင်ပြီး နာကျင်ကိုက်ခဲမှုဖြစ်စေတဲ့ prostaglandins တွေမထုတ်ပေးအောင် COX(cyclo oxygenase) ဆိုတဲ့ Enzyme ကို တားပေးပါတယ်။
တခြား Non opioid အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတွေထက် ပိုအားသာချက်တစ်ခုက Central Nervous system ဆိုတဲ့ ပင်မဦးနှောက် အာရုံကြောစနစ်မှာ စတင် အလုပ်လုပ်တာမို့ ခေါင်းကိုက်ပိုသက်သာစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရောင်ရမ်းတာတွေ ကျစေဖို့တော့ သိပ်မစွမ်းနိုင်ပါဘူး။
? Paracetamol ကို သောက်ဆေး အပြင် စအိုထဲထည့်ရတဲ့ supository ဆေးတောင့်..သွေးပြန်ကြောကနေသွင်းရတဲ့ Intravenous injection အနေနဲ့ပါ ရနိုင်ပါတယ်။ ပါရာစီတမောလ် နဲ့ အခြားအကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ဒါမှမဟုတ် နှာစေးပျောက်ဆေးတွေနဲ့ တွဲထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဆေးတွေလည်းရှိတာမို့ ဆေးတွေပိုမသောက်မိအောင် ပါဝင်ပစ္စည်းမှာ Acetaminophen လို့ရေးထားမထား သေချာသတိထားဖို့ လိုပါတယ်။
? ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေအတွက်လည်း အတော်လေးစိတ်ချသောက်လို့ ရတဲ့ ဆေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မလိုအပ်ရင်တော့ မသောက်သင့်ပါ။
? အသည်းမှာ အဓိက အလုပ်လုပ်ပြီး ဆီးကနေပြန်လည်စွန့်ထုတ်ပါတယ်။ အသည်းရောဂါရှိသူတွေမှာတော့ သတိထားသောက်ဖို့ လိုပါတယ်။
? half-life ဆိုတဲ့ သူ့အာနိသင်တစ်ဝက်ကုန်ဖို့ အချိန်က လူပေါ်မူတည်ပြီး တစ်နာရီကနေ လေးနာရီအထိ ကြာတတ်တာမို့ ဆေးသောက်ပြီး နှစ်နာရီကနေ ရှစ်နာရီအတွင်းမှာ ဆေးအရှိန်ကုန်သွားပြီး ကိုယ်ပူပြန်တက် ခေါင်းပြန်ကိုက်နိုင်ပါတယ်။
? သောက်ဆေးက ဆေးအာနိသင်ပြဖို့ ၃၇မိနစ်ကြာပါတယ်။ စအိုတွင်းထည့်ရင်တော့ ၁၅မိနစ်ကြာရင်ဆေးစွမ်းပြပါတယ်။ အကြောတွင်း ထိုးဆေးကတော့ ၈မိနစ်ဆို စသက်သာလာပါမယ်။ ထိုးဆေးကတော့ အတော်အသုံးနည်းပါတယ်။
? အများဆုံးသောက်နိုင်တဲ့ ပမာဏက တစ်ခါသောက်ရင် 1 gram(500 mg ပါရာစီတမောလ် နှစ်လုံး) ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး ခြောက်နာရီခြားဖို့လိုပါတယ်။
တစ်နေကုန်မှာ 500mg ဆေး ၈လုံးထက် မပိုရပါဘူး။ အသည်းပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ အရက်သောက်သူတွေဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးမှာပါ။
? အစာအိမ်မထိခိုက်စေတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။